အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် လှပလွန်းနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေ းကြောင့် အမျိုးသား ထုကြီးကြား နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံလေးများ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် လှပလွန်းနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေ းကြောင့် အမျိုးသား ထုကြီးကြား နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံလေးများ
အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် လှပလွန်းနေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေ းကြောင့် အမျိုးသား ထုကြီးကြား နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံလေးများ
ပုံလေး တွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှား တစ် ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ မခို့ တရို့ ပုံရိပ် လေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့် ရှိ တဲ့ ပုံလေး ကို တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ၊၊ Lလစ်ရှား ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိတ် သတ် တွေ အတွက် ပြန် လည် မျှဝေပေး လိုက် တယ် နော် ။
မြင် သူ တိုင်းငေး လောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှား ကို သိကြ မယ် ထင် ပါတယ် နော် ။ မော်ဒယ်လ်လော က ကိုဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ် ပါ တယ် … . ယောကျာ်း လေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေး မှု ရရှိထား တာပါ … .
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေ ပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိတာ တွေ့ရ ပါတယ် … .
ပုံေလး ေတြ တိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္လ္ L လစ္ရွား တစ္ ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ မခို႔ တ႐ို႕ ပုံရိပ္ ေလး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ ရွိ တဲ့ ပုံေလး ကို တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ၊၊ Lလစ္ရွား ရဲ႕ အလွ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ပရိတ္ သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္ လည္ မွ်ေဝေပး လိုက္ တယ္ ေနာ္ ။
ျမင္ သူ တိုင္းေငး ေလာက္ တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ L လစ္ရွား ကို သိၾက မယ္ ထင္ ပါတယ္ ေနာ္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ေလာ က ကိုဝင္ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ား အျပား ရဲ႕ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိ လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ဝန္းရံ အားေပး မႈ ရရွိထား တာပါ … .
သူမ ရဲ႕ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာ မွာ ေရ ပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾက တာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သူမ ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္ … .
Previous post ‘ကိုကိုရေ လာပါတော့ ဘေဘီ မျှော်လှ ပေါ့’ ဆိုပြီး အလန်းစား ပုံလေးတွေ တင်ပေ းလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
Next post ပုရိသတွေ ရင်ဖို သွားအောင် အကြမ်းစား ဗီဒီယို လေး တင်ပေး လိုက်တဲ့ မမသင်ဇာ